संसद पुनर्संरचना गर्न अर्थले किन दिएन पैसा ? - pnpkhabar.com
You are at:Home»पत्रपत्रिका»संसद पुनर्संरचना गर्न अर्थले किन दिएन पैसा ?
By रबि धिताल on ४ पुष २०७४, मंगलवार ०१:५३ पत्रपत्रिका
काठमाडौं, पुस ४ : अर्थ मन्त्रालयले संघीय संसद् पुनर्संरचना गर्न आवश्यक रकम निकासा नगरेपछि सचिवालयले आफ्नै बजेटबाट काम अघि बढाएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा हल पुनर्संरचनाका लागि सचिवालयले सरकारसँग तीन करोड ५० लाख माग गरेको थियो । तर, अर्थले तत्काल आफ्नै खर्चबाट काम अघि बढाउन भनेको सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको मतपरिणाम आइसकेको छ । समानुपातिकतर्फ मतगणना सम्पन्न भए पनि आयोगले परिणाम सार्वजनिक गर्न अझै केही समय लाग्ने जनाएको छ ।